विप्लवले खोसेको गाँस फुटपाथ व्यापारी भन्छन् : आज भोकै बसिने भो !
सन्ताेष राेकाया मंगलबार, १४ जेठ २०७६
काठमाडाैं : सोमबार नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्द आह्वान गर्‍यो । यो बन्द कसैको राजनीतिक मुद्दा हुन सक्छ । कसैकोे आराम गर्ने बहाना बन्यो होला । कतिपयको कमाइ खाने धन्दा पनि बन्न सक्यो होला । तर ‘हुँदा खाने’ फुटपाथका व्यापारीहरूको भने यो बन्द असह्य बनेको छ ।
रौतहट स्थायी घर भएका किसनराम बिहारी जहिल्यै बानेश्वर चोकमा जुत्ता सिलाइरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । आउँदा जाँदा उनीसँग पंक्तिकारको सधँै कुरा हुन्छ । ‘के छ दाइ ?’ भन्दा मुसुक्क हाँसेर ‘चलेकै छ भाइ’ भनेर उत्तर दिन्थे । तर आज भने उनी अलि पृथक मुद्रामा देखिन्थे ।
सधैँ खुसी देखिने किसन आज अलि मलिन देखिन्थे । कारण थियो ग्राहक नआउनु । जुत्ताचप्पल सिलाएर दैनिक दुई/तीन सय रुपैयाँ कमाउने किसनले आज एक रुपैयाँ नकमाएको बताए ।
तपाईं कति वर्षदेखि यो काम गर्दै आउनुभएको हो ? भनेर सोध्दा उनी २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर जनआन्दोलन चलेको थियो । म कहाँकहाँ बाट काठमाडौं आइपुगें । यता आएर कुनै काम नपाएपछि जुत्ता सिलाउने काम गरें ।’
मासिक छ/सात हजार कमाउँदै आएको बताउने किसनका एक छोरा र चार छोरी छन् । जुत्ताचप्पल सिलाएरै उनी जेनतेन छोराछोरीको पढाइ खर्च चलाइरहेको बताउँछन् ।
वि.सं. २०४७ सालमा ६ कक्षा पास गरेको बताउने उनी कुनै काम नपाएर रौतहटबाट राजधानी छिरे । उनी भन्छन्, ‘यतिका वर्ष यो काम गरेर केही गर्न सकिएन, अब विदेश जान्छु ।’
उनी अहिले बानेश्वरमै एक जनाको घरको सिँढीमुनि बस्दै आएका छन् । दैनिक जुत्ताचप्पल सिलाएको पैसाबाट आएको खानेकुरा खाने उनी आज के खाने भन्ने चिन्तामा छन् ।
बानेश्वर चोकमै जुत्ताचप्पल सिलाउँदै आएका सञ्जय राम पनि आज कमाइ नभएको बताउँछन् । दैनिक तीन/चार सय रुपैयाँ जति आम्दानी गर्ने गरेका सञ्जयले आज एक सय मात्र कमाएको बताए । आज बन्द भएका कारण एक/दुई जना मात्र ग्राहक आएको उनी बताउँछन् ।
स्थायी घर सर्लाही भएका सञ्जय काठमाडौंको शंखमूल बस्दै आएका छन् । एक छोरा र एक छोरी भएका उनको जुत्ताचप्पल सिलाएरै जीविका चलेको छ ।
जुत्ता चप्पल सिलाउँदै आएको छ/सात वर्ष भएको बताउने सञ्जय भन्छन्, ‘आम्दानी कहिले बढी हुन्छ, कहिले कम हुन्छ, आज त भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’
किसुन र सञ्जयको मात्र होइन सोमबारको बन्दले हरेक हुँदा खानेहरूको गाँस खोसिएको छ । दिनभर दिउँसोको टन्टलापुर घाम सहेर राति एक छाक टार्न नपाउनु विडम्बना हो ।
देशमा हुने गरेका हरेक बन्द हड्तालले विभिन्न पक्षमा त प्रभाव पार्छ नै, दैनिक कमाएर खाने, हुँदा खानेहरूको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै लात हानेको छ । देशमा भइरहेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्यले गरेका बन्द हड्तालभन्दा जुनसुकै निकाय तथा पक्षले पनि सिर्जनात्मक रुपले समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छ ।
सोमबार भएको बन्दले बजारमा आशिंक प्रभाव पारे पनि हुँदा खानेहरूमाथि भने पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, १४ जेठ २०७६